Ahoana ny fomba hanamboarana ny fivezivezena amin'ny varotra ho an'ny famokarana bebe kokoa | Martech Zone
Talata, Septambra 27, 2016 Talata, Septambra 27, 2016 Ashley Walsh
Sahirana ve ianao amin'ny fampiroboroboana ny famokarana vokatra manerana ny orinasanao? Raha izany dia tsy irery ianao. Notaterin'ny ServiceNow fa mandany vola be ny mpitantana ankehitriny 40 isan-jaton'ny herinandro fiasana amin'ny asa fitantanan-draharaha izay midika hoe manana antsasaky ny herinandro mahery izy ireo hifantohany amin'ny asa stratejika manan-danja.
Ny vaovao tsara dia misy ny vahaolana: automatisation workflow. Enina ambin'ny valompolo isanjaton'ny mpitantana no mino fa hampitombo ny vokatra ny fizotran'ny asa mandeha ho azy. ary 55 isan-jaton'ny mpiasa faly amin'ny fahatsinjovan'ireo rafitra mandeha ho azy hisolo ny asa miverimberina.
Raha te-hanomboka ny paikadinao mandeha ho azy ianao, dia ataovy izay hametrahana vahaolana endrika an-tserasera marobe. Ny endrika an-tserasera dia fitaovana lehibe amin'ny fitantanana amin'ny fomba mahomby ny fifanakalozana nomerika, ary izy ireo dia afaka manampy ny sampana rehetra ao amin'ny orinasanao hanaisotra ireo asa mandreraka amin'ny lalan'ny asany.
Ny ekipa mpivarotra dia afaka mahazo tombony manokana amin'ny fampiasana teknolojia endrika an-tserasera hamoronana lamina mirindra. Ireto misy fomba manan-danja vitsivitsy manatsara ny fizotran'ny varotra amin'ny fampitomboana ny vokatra:
# 1: Mitsitsia fotoana amin'ny famolavolana endrika marika
Ny marika dia ampahany lehibe amin'ny marketing. Izay rehetra apetraky ny departemantan'ny varotrao eo imason'ny mpanjifa — ao anatin'izany ny endrika an-tserasera — dia mila mifanandrify amin'ny bikan'ny marika sy ny fahatsapanao. Saingy ny famoronana endrika marika avy amin'ny rangotra dia mety hitsentsitra fotoana be.
Ampidiro ny mpanamboatra endrika an-tserasera.
Fitaovana fanaovana endrika an-tserasera dia afaka manampy ny sampan-draharahan'ny varotrao hamolavola haingana sy hamoaka endrika misy marika hanangonana fitarihana bebe kokoa. Ny fampiasa haingo namboarina dia mamela ny ekipanao hametraka loko sy endritsoratra endrika ary mampakatra logo tsy misy fahalalana momba ny kaody! Azonao atao mihitsy aza ny mampiditra endrika an-tserasera amin'ny tranokalanao mora foana.
Te hanana porofo fa mandeha io? Ny fahaizan'ny marika tsotra sy ny endrika azo ampidirina atolotra amin'ny alàlan'ny mpanao endrika an-tserasera dia nanampy oniversite iray mampitombo ny fitsidihan'ny campus 45 isan-jato ary nanamafy ny fisoratana anarana ho 70 isan-jato tao anatin'ny roa taona monja.
# 2: Manangona haingana sy mora mitarika fitarihana mendrika
Laharam-pahamehana ho an'ny ankamaroan'ny departemantan'ny marketing ny fanangonana fitarihana mpitovo mahomby ho an'ny orinasa. Ary ny fampiasana mpanamboatra endrika an-tserasera hamerenana ny fizotran'ny fanangonana firaka dia mety hahomby tokoa.
Miaraka amin'ny fitaovana fanaovana endrika an-tserasera, ny mpivarotra dia afaka mamorona endrika fisoratana anarana hetsika, endrika fifandraisana, fanadihadiana amin'ny mpanjifa, endrika fampidinana atiny, ary maro hafa ho an'ny fanangonana firaka mora. Afaka mampiasa form ihany koa izy ireo Analytics endri-javatra hahitana tavoahangy mety amina tavoahangy ao anaty endrika ary manamboatra haingana hanatsara ny tahan'ny fiovam-po.
iray masoivoho marketing digital apetraho amin'ny andrana miaraka amin'ny mpanjifa fikambanan'ny mpitsabo ity ary nanampy ny mpanjifa hanangona sy hitantana fisoratana anarana 1,100 90 manerana ny firenena 30 ao anatin'ny 114 andro monja. Ny masoivoho koa dia nampitombo ny tahan'ny fiovan'ny fisoratana anarana XNUMX isan-jato.
# 3: Mamorona Hub momba ny fampahalalana azo idirana ho an'ny angona firaketana
Raha vantany vao nangonina ny angon-drakitra, dia zava-dehibe ho an'ny mpivarotra (sy ny solo-barotra) ny fahazoana miditra mora aminy mba hahafahan'izy ireo manara-maso sy manadihady ny kalitaon'ny fitarihana ary hanaraka raha ilaina izany. Ny mpanorina endrika an-tserasera dia afaka manamora ny fizotrany.
Ny angona voaangona amin'ny alàlan'ny endrika an-tserasera dia azo tehirizina sy jerena ao anaty tahiry voarindra sy mizara, ahafahan'ny mpivarotra sy ny mpivarotra mahita sy manara-maso ny fisoratana anarana, ny fanontaniana ary ny fitarihana. Ny data dia azo alefa ho azy amin'ny fitaovana hafa ampiasain'ny ekipa, toy ny rafitra marketing amin'ny mailaka na mpitantana ny fifandraisana amin'ny mpanjifa.
Ny fampivoarana ny fizotran'ny varotra ataonao amin'ny alàlan'ny automatisation d'exploitation dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny famokarana an'io departemanta io. Ny fampiasana mpanamboatra endrika an-tserasera hamoronana endrika marika haingana ho an'ny fanangonana firaka mahomby sy fitantanana data ao anaty tahiry azo idirana dia afaka mamonjy fotoana fohy ny mpivarotra. Ary ny fanamafisana ny vokatra ao amin'ny ekipa marketing anao dia mety ho dingana voalohany amin'ny famoronana fiasa mahomby sy mahomby kokoa manerana ny orinasanao.
Tags: manangona mitarikaendrika infographicformstackfampahalalam-baovaofiraketana datampanamboatra endrika an-tseraserafitarihana mahaystatistikan'ny endrika tranonkalaendrika web